China na-enye 30Khz Ultrasound Cutting Device for Robot Hand Cutting Iji Manufacture and Factory | Qianrong
Igwe Mgbucha Ultrasonic
Ultrasonic achicha Food cutter
Ultrasonic ịgbado ọkụ Machine
Ultrasonic Mask ịgbado ọkụ System
15Khz Ultrasonic ịgbado ọkụ Sistemụ
20Khz Ultrasonic ịgbado ọkụ Sistemụ
Ultrasonic Metal ịgbado ọkụ Machine
Ultrasonic Metal Abù Welder
Ultrasonic welder maka Mbara Igwe Okpomọkụ Colchịkọta
Ultrasonic Waya Splicer
Ultrasonic Plastic ịgbado ọkụ Machine
Ultrasonic Rotary akara System
20Khz Ultrasonic Rotary ịgbado ọkụ System
35Khz Ultrasonic Rotary ịgbado ọkụ System
Ultrasonic Abù ịgbado ọkụ System
28Khz Ultrasonic Abù Welder
30Khz Ultrasonic Abù Welder
35Khz Ultrasonic Abù Welder
15Khz Ultrasonic Ike Tụkwasịnụ
20Khz Ultrasonic Ike Tụkwasịnụ
28Khz Ultrasonic Ike Tụkwasịnụ
30Khz Ultrasonic Ike Tụkwasịnụ
35Khz Ultrasonic Ike Tụkwasịnụ
60Khz Ultrasonic Ike Tụkwasịnụ
70Khz Ultrasonic Ike Tụkwasịnụ
Ultrasonic ịgbado ọkụ Transducer
20Khz Ultrasonic Ntughari
Ultrasonic Nnọchi Ihe Ntụgharị
Ultrasonic ọma jijiji Series
15Khz Ultrasonic Transducer na Booster
20Khz Ultrasonic Transducer na Booster
28Khz Ultrasonic Transducer na Booster
30Khz Ultrasonic Transducer na Booster
35Khz Ultrasonic Transducer na Booster
40Khz Ultrasonic Transducer na Booster
60Khz Ultrasonic Transducer na Booster
70Khz Ultrasonic Transducer na Booster
Ultrasonic Automation spraying Akụrụngwa
Ultrasonic akpaaka System
Ultrasonic Nano raygba
Ultrasonic Liquid Ọgwụgwọ akụrụngwa
Ultimate Experimental Sonochemistry
Ultrasonic nsị Ọgwụgwọ System
Ultrasonic-abụghị ọkọlọtọ ngwaahia Ngwaahịa
Ngwaọrụ Nnwale Ultrasonic
Ihe nyocha nke Ultrasonic
20Khz Ultrasonic ahaziri ịgbado ọkụ Horn na Anodiz ...
High Frequency 20khz Ultrasonic Industrial homogeniz ...
High Frequency 35Khz 1000w Ultrasonic akara Equipm ...
Ultrasonic Copper Aluminom Nchigharị 20Khz 3000w Anyị ...
Nickel ntupu na Nickel efere ịgbado ọkụ site 3000w 20Khz ...
20Khz Ultrasonic Rubber Cutting Device with 60mm Bla ...
20Khz 1500w Ultrasonic ịgbado ọkụ Transducer na Steel ...
15Khz 2600w High Power Ultrasonic ịgbado ọkụ Oscillator ...
Inye 30Khz Ultrasound Cutting Ngwaọrụ maka Robot Aka Cutting Iji
Nkebi Nke QR-C30Y
Generator Igwe na-enye ọkụ
Voltaji 220V ma ọ bụ 110V
Ibu nke agụba 1.25kgs
Mkpokọta nha 11.5kg
Ngwa Onye na-akwa ákwà
Principlekpụrụ nke mma mma ultrasonic bụ iji gbanwee 50 / 60Hz ugbu a n'ime 20, 30 ma ọ bụ 40kHz ike eletrik site na ultrasonic generator. A gbanwere ike eletriki a gbanwere ugboro ugboro na ntanetị nke otu ugboro site na transducer, mgbe ahụ, a na-ebugharị vibration na-egbutu mma na-egbutu ya site na otu ngwaọrụ modulator nke nwere ike ịgbanwe njupụta ahụ. Onye na-egbutu roba ultrasonic na-emegharị ogologo ya na njupụta nke 10-70μm, na-ekwughachi ugboro 30,000 (30 kHz) kwa nke abụọ (ịma jijiji nke agụba bụ microscopic, nke na-esikarị ike iji anya gba ọtọ). Mbelata mbelata na-ebufe ike natara ikike na mbelata nke ebe ọrụ a ga-ebipụ. Na mpaghara a, a na-eji ike ọma jijiji ebipụ roba ahụ site na ịgbalite ume ike nke roba ma mepee sel ahụ.
Ngwa-arụnyere mma ịcha mma-ịcha mma ultrasonic
1. Mfe itinye n'ọrụ na akpaghị aka mmepụta.
2. agụba 1mm nwere obere ihe funahụrụ ya.
3. Ọsọ ọsọ, arụmọrụ dị elu na enweghị mmetọ.
4. Icha nkenke dị elu, na ihe na-eme ka ihe na-adịghị mma.
5. Ebe a na-egbutu ala nwere ezigbo ire ụtọ na arụmọrụ dị mma.
6. Akụrụngwa pere mpe ma enwere ike iji ya igbutu aka.
1. Nnukwu nkwụsi ike: Onye na-ewepụta ultrasonic site na electromagnetic vibration mgbe ọ na-arụ ọrụ, ma gbanwee ya n'ime oscillation n'ibu ma nyefe ya na mma ịcha na ịcha ihe. A na-arụ ọrụ ịkpụzi arụ ọrụ, ya mere ọ dịghị mkpa mbelata dị mkpa, yana akwa agụba dị obere, ma n'otu oge ahụ Onye isi cutter nwere ike dochie ya n'onwe ya.
2. Nchedo na nchedo gburugburu ebe obibi: Mgbe a na-ebipụ mma ultrasonic, ọnọdụ okpomọkụ nke isi cutter dị ala karịa 50 Celsius, ọ nweghị anwụrụ ọkụ na isi ísì ga-eme, nke na-ewepụ ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ na ọkụ n'oge ịcha.
3. Cutchacha nke ọma: Ebe ọ bụ na a na-egbutu ebili mmiri ultrasonic site na ịma jijiji nke ukwuu, ihe ahụ agaghị agbaso elu nke agụba ahụ, ọ bụ naanị obere nrụgide ka achọrọ maka ịcha, na ihe ndị na-emebi emebi na nke dị nro adịghị agbanwe ma na-eyi, na akwa na-ebipụ na-akpaghị aka akara. Agaghị eme ka chipping.
4. Ọrụ dị mfe: a na-ejikọ mma ịkpụ na ultrasonic generator, generator na jikọọ na 220V mains, a ga-egbutu ihe ọkụ ọkụ iji kwado ọnwụ aka na igwe.
Nke gara aga: Aka jidere 40khz Ultrasonic Food cutter With Digital Generator No Sticking Knife
Osote: Ultrasonic cutter na 35Khz Frequency maka tingcha iche iche overlapping mejupụtara Materials
Hangzhou Qianrong akpaaka Equipment Co., Ltd.
Ekwentị: 0086- (0) 571-58977669
E-mail: qrsonic@qrequ akwa.com